बूढानीलकण्ठ कार दुर्घट*ना -मापसे गरेर चलाएको कारमा को थिए ती दुई युवती ? – " कञ्चनजंगा News "
बूढानीलकण्ठ कार दुर्घट*ना -मापसे गरेर चलाएको कारमा को थिए ती दुई युवती ?
No Comments on बूढानीलकण्ठ कार दुर्घट*ना -मापसे गरेर चलाएको कारमा को थिए ती दुई युवती ?
काठमाडौँ । गत शनिबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ बसपार्क नजिकैको सडकमा एउटा कारले ठक्कर दिँदा गोरखा घर भएकी लिला देवकोटाको मृत्यु भयो । देवकोटालाई ठक्कर दिने गाडी चालक हुन् पृथ्वी मल्ल ।
← अस्पतालको बेडमा थलिएकी श्रीमतीको स्याहारमा जुटेका बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पी डा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मा रि दिनुस्’ भन्छिन् (भिडियो हेर्नुस्) → यसकारण नायिका ऐश्वर्या रायले पुरा गर्न सकिनन् आफ्नो पढ्ने सपना ! जान्नुहोस् उनका १० रहस्य